स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता | | Nepali Health
स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता
विधेयकमा के के छन् ?
२०७४ वैशाख १६ गते ७:५० मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १६ वैशाख । सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सामेल गराउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । विधेयकले हाल सञ्चालनमा रहेका बिमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गर्दै सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्य लिएको छ ।
वार्षिक दुई हजार पाँच सय प्रिमियम लिएर ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा दिने गरी अहिले यो कार्यक्रममा आठ जिल्लामा लागू भएको छ । ती जिल्लाहरुमा कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दी रहेका छन् । हालको बिमा कार्यक्रमको दायरा बढाउन सरकारले कानुनी व्यवस्थासहित विधेयक ल्याएको हो ।
बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि सुविधा के – के पाइन्छ ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने प्रयोजनका लागि परिवारलाई एकाई मानिएको छ । उक्त परिभाषाअनुसार बिमा कार्यक्रममा सामेल हुने व्यक्तिले तोकिएको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
विधेयकअनुसार योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनो–सामाजिक परामर्शजस्ता प्रवद्र्धनात्मक सेवा बिमितले पाउनेछन् । यस्तै, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिरोधात्मक सेवा पनि बिमितले पाउनेछन् । बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरणजस्ता उपचारात्मक सेवालाई पनि बिमितले पाउनु सेवाको सूचीमा विधेयकले राखेको छ ।
यस्तै, निदानात्मक वा पुर्नस्थापनासम्बन्धी सेवा तथा हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवा पनि बिमितले पाउनेछन् ।
तर, बिमितले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीको सेवा भने पाउनेछैनन् । जसमा प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवा लगायतका सेवा हुने छैनन् । विधेयकले बिमितले नपाउने सेवाबारे निर्देशिकाले तोकेबमोजिम हुने समेत उल्लेख गरेको छ ।
आजको गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेको समाचार
ललितपुर भयो २६ औँ पूर्णखोपयुक्त जिल्ला
फर्मासिस्टले पाए २० हजार डलरको अन्तर्राष्ट्रिय ‘फेलोसिप’